Izitimela ezihamba ngesivinini esikhulu i-Eurostar iyisevisi exhuma i-Western Europe ukuya eLondon naseKent e-United Kingdom, Ukuxhumana okuvela eYurophu yiParis neLille eFrance, Brussels, kanye ne-Antwerp eBelgium, IRotterdam ne-Amsterdam eNetherlands. Futhi, ungathola ngesitimela usuka eLondon uye eDisneyland Paris (Isiteshi sesitimela saseMarne La Vallee Chessy) futhi izindawo eziba khona ngezikhathi ezithile eFrance EzinjengeMarseilles neMoutiers kwiiFrench Alps. Zonke izitimela ze-Eurostar zinqamula ku-English Channel ngeChannel Tun tun.
Eurostar, Amanani amathikithi ashibhile ngesikhathi samahora okude, ekuqaleni kwesonto, futhi emini. Maphakathi nesonto uhamba ngezitimela (NgoLwesibili, ULwesithathu noLwesine) kuvame ukunikela ngamanani ashibhile. Ngamanani amahle kakhulu, ungathathi i-Eurostar ekuseni nakusihlwa phakathi nesonto (ngenxa yabahambi abaningi bebhizinisi), futhi ugweme ukuthatha abagibeli be-Eurostar ngoLwesihlanu kusihlwa nangeSonto (evumelana nokuthola izimpelasonto), ngesikhathi amaholide omphakathi futhi nangesikhathi samaholide esikole amanani e-Eurostar skyrocket.
1) Inzuzo yokuhamba kwe-Eurostar ukuthi uya futhi ufike ngqo enkabeni yedolobha kunoma yimaphi amadolobha osuka kuwo, le yinto ehlukile kakhulu kuzitimela, ngakho-ke uma uqeqesha ukuhamba usuka eParis, Brussels, Amsterdam, Rotterdam, Antwerp, ILille noma iLondon lokhu kuyinzuzo enkulu ye-Eurostar. Uma kuziwa Amanani e-Eurostar, kuvame ukwahluka. Okunye ukukhushulwa kukuvumela ukuthi uthole amathikithi ashibhile we-Eurostar. Kepha ngezinsuku zokugcina ngaphambi kokusuka, amanani ayakhuphuka. Uma uthanda ukuhamba okuhle, I-Eurostar ingeyakho!
Uyini umehluko phakathi kweZinga, Standard Premier, kanye noNdunankulu webhizinisi kwi-Eurostar?
Izitimela ze-Eurostar zinezinsizakalo ezimbalwa zekilasi ezakhelwe noma iziphi izabelomali, nanoma yiluphi uhlobo lokuhamba, noma ngabe ungukuhamba ngebhizinisi noma ukuzilibazisa noma womabili 🙂
Lesi sigaba samathikithi sibiza kakhulu kunohlobo lwamathikithi e-Standard Eurostar, le Ithikithi lePremier Standard inikeza izinsizakalo ezingeziwe. Ngaphezu kwezinzuzo zamathikithi ajwayelekile esiwabhale ngenhla, Amathikithi wePremier Standard anikeza izihlalo ezinhle kakhulu ngegumbi lezinyawo, kukhethwa mahhala nomagazini noma amaphephandaba, futhi uthola ukudla okulula nokuphuzwayo kusihlalo sakho kumkhumbi we-Eurostar. Amathikithi wePremier Standard ayashintshwa ngemali ekhokhwa ngokuya lapho uya khona.
– Uma ufika 500 amaphuzu: ungathola 1 ukuthuthukiswa kwensiza.
I Brussels Midi-Zuid (EBrussels South) Isiteshi sitholakala maphakathi neBrussels, kepha qiniseka ukuthi uyaqonda ukuthi uyakudinga Brussels Midi-Zuid futhi hhayi iBrussels Central Station, Isiteshi sesitimela saseBrussels Midi-Zuid sine 22 uqeqesha amapulatifomu, nehhovisi lamathikithi e-Eurostar liseduze nepulatifomu 8. Ithikithi lesitimela le-Eurostar likuvumela ukuba uhambe ngokukhululeka phakathi kweBrussels Midi Zuid neBrussels Central.
Amsterdam Centraal (Amsterdam Central Station) itholakala enkabeni yedolobha lase-Amsterdam eduze komfula, lapho usuka esiteshini sesitimela, ubona i-Amsterdam Main Street egcwele izinto ezinjenge-madame Tussauds hhayi ukusuka lapho futhi nesifunda esibomvu. Njengakwiziteshi eziningi ezinkulu zesitimela eYurophu, une amadepho wemithwalo avulwa ekuseni futhi avale sekwedlule isikhathi uma ufuna ukuvakasha nje 1 ngosuku noma ngaphambi kokungena ehhotela lakho.
Isiteshi Sase-Antwerp Central kulapho ugibela khona i-Eurostar e-Antwerp idolobha lesibili ngobukhulu laseBelgium, Uma usuka e-Antwerp, sincoma ukuthi empeleni ufike esiteshini sesitimela eside kunalokho okunconyiwe 1 ihora ngaphambi kokusuka ngoba isiteshi sesitimela siwine imiklomelo yokuhlobisa nobuciko bokwakha 5 phansi futhi kuhle kakhulu ukuba ungene kuwo.
Ngabe ufuna ukushumeka leli khasi esizeni lakho? Chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-eurostar%2F%0A - (Skrolela phansi ukuze ubone Shumeka Ikhodi), Noma ungaxhumeka ngqo kuleli khasi.